ALAKAMISY 15 AVRILY 2021
FIATREHANA NY FIFIDIANANA : Ifandrombonan’ireo sehatra maro ny fanaraha-maso azy
Mifantoka tanteraka amin’ny fikarakarana ny fifidianana i Madagasikara ankehitriny. Fifidianana izay vahaolana tokana hitan’ny rehetra fa hitondra fanovana eto amin’ny firenena. 1er octobre 2018
Kendrena ny mba hahatanterahan’izany ao anatin’ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana.
Tanjona ihany koa ny hanaovana fifidianana ao anatin’ny fangaraharana ka ho vokatra eken’ny rehetra no hivoaka fa tsy sanatria hitondra korontana vaovao eto amin’ny firenena indray. Manoloana izany indray dia manao be fiavy avokoa ny eo anivon’ny fiaraha-monim-pirenena, ny antoko politika sy ny fikambanana isan-tokony miara-maneho ny fahavononany fa hanara-maso akaiky ny fizotry ny fifidianana. Hatramin’ny vondrona iraisam-pirenena aza dia milaza ny hanara-maso akaiky izay fizotry ny fifidianana izay amin’ny alalan’ny fanambarana nataon’ ireo masoivohon’ireo firenen-dehibe miasa sy monina eto Madagasikara.
Mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana no hiompanan’izay fanaraha-maso izay mba ho anatin’ny filaminana tanteraka no hiatrehan’ny vahoaka ny fifidianana izay olona heverina fa tokony hitondra ny fireneny ao anatin’ny dimy taona manaraka indray. Amin’ny ankapobeny dia samy manana ny anjara andraikiny ireo sehatra isan-tokony amin’izay fanaraha-maso ny fifidianana izay. Misy ireo hijery akaiky ny fizotrin’ny fandatsaham-bato eny anivon’ireo birao natokana ho amin’izany, raha misy kosa ireo hanara-maso izay mety ho endrika tsy fanarahan-dalàna hataon’ireo kandidà mpifaninana.
Ho an’ny vovonana fiaraha-monim-pirenena DFP manokana dia hanara-maso akaiky ilay andinin-dalàna voafaritra ao anatin’ny lalàm-panorenana izay mamaritra ny tsy fahazoan’ireo kandidà mampiasa ny fitaovam-panjakana sy ny fihetsik’ireo mpiasam-panjakana mandritra ny fampielezan-kevitra izy ireo. “Mazava be ny voalazan’ny lalàna fa rehefa mety ho mpiasam-panjakana na sivily na miaramila dia voararan’ny lalàna tsy mahazo manao fampielezan-kevitra” hoy ny mpitondra tenin’ny DFP, Ratoloja-nahary Maharavo raha nitondra ny fanazavany. Amin’ny ankapobeny dia hiady amin’ny mety hisian’ny hala-bato ireto mpirotsaka hanara-maso ny fifidianana ireto.